Izixhobo zoPhuculo lweWireframe zisebenzisana | Martech Zone
NgoMgqibelo, Novemba 20, 2010 NgeCawa, ngoFebruwari 17, 2013 Douglas Karr
Kunyaka ophelileyo, bendisokola ukufumana isixhobo sefowuni esasilula, songezwa izixhobo zokusebenzisana, kwaye eneneni sinamacandelo asebenzisanayo alingisa indlela izinto ze-HTML nezinto ezisebenza ngayo. Ukukhangela kwam kwaphela IHotgloo.
Ukusuka kwindawo yabo: IHotGloo sisicelo esityebileyo se-intanethi eyilelwe ukwakha iifowuni zomnxeba ezisebenzayo kwi-intanethi kwiwebhusayithi okanye iiprojekthi zewebhu. Yenza kwaye wabelane ngokusebenzisana ngokupheleleyo kwi-intanethi. Sebenzisana noogxa bakho kwaye nabelane ngemveliso nabathengi. IHotGloo ngumdlalo ofanelekileyo kuye nabani na osebenza kwiiprojekthi zewebhu.
Into endiyithandayo kakhulu ngeHotgloo kukukwazi ukongeza izinto ezinje ngee-interface ezinamathebhu, iikhonsathi, iimephu kunye neetshathi. Yonke into oyilahlayo kwiphepha iyasebenzisana… ukuze ubonelele umxhasi wakho nge Ukusebenza, intambo yocingo kunokuba ngokulula imifanekiso engabonisi unxibelelwano. Kule veki iphelileyo, kuye kwafuneka ndithumele i-wireframes kwi-arhente kwaye, kunye neHotgloo, kundithathe iiyure ezingaphantsi kwe-2 ukuyila indawo yonke enamaphepha amaninzi kunye nonxibelelwano.
Umxhasi wakho unethuba lokurhuqa amanqaku kumzekelo wokuqala kunye nokubeka izimvo okanye ukushiya imibuzo kuyo yonke indawo. Ukuba ndinomnqweno omnye weHotgloo, iya kuba kukucela amaphepha angaphantsi. Okwangoku, onke amaphepha ahlala kuluhlu olunye kwibar esecaleni. Ukuba neendidi okanye ukubanakho ukongeza iphepha phantsi kwephepha kunokuba kuhle ukuhlela iisayithi ezintsonkothileyo okanye iiprojekthi.
Amaxabiso afikeleleka kakhulu, ukusukela kumsebenzisi omnye kwi-7 yeedola ngenyanga ukuya kuguqulelo lweshishini elinabasebenzisi abangenamkhawulo be- $ 48 ngenyanga. Ukuba ungumfundi, ungahlawula i- $ 5 ngenyanga kwilayisenisi yeqela!
tags: Intsebenziswanoizixhobo zobekoubeko lwephephaUbeko lwephepha lewebhuifayileizixhobo zefowuniucingo
Agasti 14, 2011 ngo-12: 47 PM
Enkosi ngokujonga kwakhona uDouglas. Bukela uhlobo lwe-3.0, olukhutshwa ngo-Agasti 15.
Agasti 14, 2011 ngo-3: 24 PM
Ukujonge phambili kuyo, Ingcuka!